'सेल्फिस सेल्फी'सेल्फी लिनु धेरैको सोख बन्न पुगेको छ। तर, ठाउँकुठाउँ सेल्फी लिनेहरूले भने ठूलो आलोचना खेप्नुपर्दो रहेछ। गतसाता आपत्ग्रस्त ठाउँमा सेल्फी लिएर सन्तुष्टि लिने थुप्रै भेटिए। छन्दोवादी साहित्यकारका पक्षबाट
– गाउँले बलदेव
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अचेल छन्दोवादी कवि र छन्दका कवितालाई फुटेका आँखाले पनि हेर्न नसक्ने भएको छ। त्यस प्रतिष्ठानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकबाहेक अरूलाई चिन्दैन। नेपाली बृहत् शब्दकोश त्रिभुवन...	सुन्दर ओठका लागिमहिलाको सौन्दर्यमा ओठको ठूलो भूमिका हुन्छ। अनुहारको अरू भागमा जस्तै ओठमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। फुटेको, छाला निस्केको र कालो भएको ओठले तपाईंको सौन्दर्यप्रति उदासीनतालाई जनाउँछन्। 'लहैलहैमा गायिका भएँ'कति भयो गाउन थालेको?नाच–गान त बच्चैदेखि गरिन्थ्यो । तर, ठूलो भएर गायिका हुँला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ। दुई वर्ष गायक गौरव गुरुङ दाइले एल्बम निकाल्न हौसला दिनुभयो। गाइदिएँ। लहैलहैमा गायिका...	चर्चाका लागि चर्तिकला
28 Mar 2015 १४ चैत्र, २०७१
डिबी खड्का फिल्म क्षेत्रमा टिक्नका लागि, बिक्नका लागि फिल्मकर्मीले चर्चामा रहनुपर्छ। अखबार र टीभीमा छाउनुपर्छ। फिल्म चलाउन निर्माता–निर्देशकले प्रचार गर्नुपर्छ। यी सामान्य सत्य हुन्। तर, चर्चाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने फिल्मकर्मीको जमात बाक्लिँदै छ। उनीहरू प्रेम र सम्बन्धलाई समेत चर्चाको… विस्तृतमा
समलिंगीलाई कठोर सजाय
26 Mar 2015 बिहीबार १२ चैत्र, २०७१
नागरिक धेरै देशमा समलैंगिक सम्बन्धलाई 'पाप' वा 'अपराध'का रूपमा हेरिन्छ। केही देशमा त समलिंगीलाई कठोर सजाय दिइन्छ। उनीहरूलाई कैद र मृत्युदण्ड समेत दिइन्छ। समलिंगीका लागि कठोर छन्, यी १० देशः विस्तृतमा
21 Mar 2015 ७ चैत्र, २०७१
गाउँले बलदेव यस वर्षको प्रवेशिका अर्थात् एस.एल.सी. परीक्षाको तयारीमा लाग्नुभएको किशोर–किशोरी मित्रहरू अथवा भाइबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभ–कामनासहित परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उपाय सिकाउँ कि कि भनेर आएको छु। एक्कै छिन मेरा कुरा सुनेर पढ्न गइहाल्नुहोला। परीक्षा, कुकुर र कालसँग जो डराउँछ उही टोकिन्छ। नडराउने… विस्तृतमा
धुर्मुस जोडी भन्छन्- 'सरसफाइ अभियान नेताको दिमागसम्म चलाउनुपर्छ'
डिबी खड्का सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई भन्दा धुर्मुस र सुन्तलीलाई चिन्ने मानिस बढी छन्। यो जोडी टेलिशृंखला 'मेरी बास्सै'लाई मूल घर र आफ्नो घरलाई दोस्रो घर ठान्छ। यो टेलिशृंखलाले उनीहरूलाई चर्चित मात्र गराएन, घरजमसम्म पनि पुर्याञइदियो। पेशा र जीवन दुइटैमा सहकार्य… विस्तृतमा
एसएलसी परीक्षा : 'आइरन गेट' कि 'वेलकम गेट?'
19 Mar 2015 बिहीबार ५ चैत्र, २०७१
नागरिक विद्यार्थी भाइबहिनी हो, एसएलसी कुनै दैत्य होइन। यसबाट तर्सिनुपर्ने, डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाईंहरूले दिनुभएका अन्य जाँचजस्तै यो पनि एउटा सामान्य जाँच हो। यसमा कम नम्बर आउँदैमा वा असफल हुँदैमा प्रगतिका बाटाहरू बन्द हुने होइनन्। यसले मात्रै भविष्य निर्धारण गर्ने… विस्तृतमा
16 Mar 2015 सोमबार २ चैत्र, २०७१
विनोदविक्रम केसी मन्त्री महोदय छाँगोबाट खसेझैँ भयो। छाँगो पनि पोखराको पाताले होइन, अमेरिकाको नायगारा फल्सबाट। पातालेबाट खस्नु दम्भ र अहंकारका पर्याय उसको हैसियतको मानहानि हुन्थ्यो। विस्तृतमा
यौनरोग कि मनोरोग?
15 Mar 2015 आइतबार १ चैत्र, २०७१
नागरिक यौनजीवन स्वस्थ भएन भने मान्छे निराश, कुण्ठित र हताश हुन्छ। जीवनमा उसले कुनै सौन्दर्य देख्दैन, कुनै मिठास भेट्दैन। शारीरिक तथा मानसिक रोग र समस्याले यौनजीवन तहसनहस बनाउन सक्छन्। भनिन्छ– करिब ८५ प्रतिशत यौन समस्या मानसिक हुन्छन्। र, पीडित व्यक्ति भने… विस्तृतमा
एजेन्सी एन्जेलिना जोलीहलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीको यौनजीवन विवादित खालको छ। उनी पुरुष र महिला दुवैसँग सेक्समा लीन हुने ‘बाइसेक्सुअल' भएको चर्चा हलिउड वृत्तमा चर्को छ। जोलीले समेत एक अवसरमा कुनै समय आफू बाइसेक्सुअल भएको स्वीकार गरेकी थिइन्। विस्तृतमा
लाहुरे बन्न लालायित
नागरिक सपनाः लाहुरे छोराहरूको बाउको मानिस होला, जसले सपना देख्दैन। एउटा सपना विपना बन्न नपाउँदै अर्को सपना देखिहाल्न आत्तिन्छ मान्छे। काभ्रे, बनेपाका हरिध्वज थापासँग पनि सपनाको चाङ छ। उनका सपनाले साकार रूप पाउने क्रम भने सुरु भइसकेको छ। विस्तृतमा